Iifonti zasimahla ezingama-39 zemibuliso yeholide | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti zasimahla ezingama-39 zeKrisimesi
Nangona sele sihamba phakathi kweKrisimesi, sisaqhubeka Ngaba likho ixesha lokuthumela loo mihlali okanye ubeke ikhadi kweso sipho siza kusenza ngobu bushumi elinambini. Zisekhona iintsuku phambi kokuphela kwalo nyaka ezakuthatha iinkumbulo kunye namabali amaninzi kunye naye.
Nokuba kubusuku beshumi elinesibini siya kuba nakho ukubonisa ngcono umbuliso kumntu omthandayo ngokusebenzisa iifonti ezingama-39 zamahala Yekrisimesi esikulethela yona ngokupapashwa kwi-Creativos kwi-Intanethi. Iifonti zale mibhiyozo eya kwenza uyilo lwakho lube lolonwabisayo noluthandekayo.
1 Umkhobe weswekile
2 Ibhokisi Bloc
3 UFeliz Navidad
5 Dickens iKrisimesi
6 Ikhadi leKrisimesi
7 Ijezi embi
8 Ixesha leKrisimesi
10 Ndiyayithanda ikrisimesi
11 IKrisimesi uDebbie
12 Umbuliso weKrisimesi
13 Isikripthi seKrisimesi
15 Ngobusuku obungaphambi kweKrisimesi
16 Ubusuku beenkwenkwezi
17 E Rothenburg
18 Ngaphandle kwemimangaliso
20 Iileta zeelekese
21 ngaphimbi kwekhisimusi
22 Imfihlo kaSanta
25 Ijezi yeXmas
26 IKrisimesi yeKingthings 2
27 Ikrisimesi emyoli
28 Ixesha leSanta
29 Ifonti yeKrisimesi
30 Usuku lweKrisimesi
31 Imihlobiso yeKrisimesi
32 Isixeko sokuKhanya
33 Ibhola ekhephu
37 Izandi zeKrisimesi
38 Ifashoni yeKrisimesi
Omnye ifonti yeelekese ezimnandi kwaye oko kuthatha yonke indima ekhokelayo ukusuka kumzuzu wokuqala.
Uhlobo lochwethezoilungele ithoni eqhelekileyo kwaye loo nto isivumela ukuba sizobe phantse ngesandla kwikhathuni.
Yeyona nto ilungileyo kuzo zonke oya kuzifumana nge isimbo esingathandabuzekiyo kunye neKrisimesi elungileyo.
Ifonti eboniswe kakhulu ene zonke iintlobo zekrisimesi ezakubonisa kakuhle loo makhadi emibuliso.
Omnye Uhlobo olusekwe kuDickens ukumangalisa abo ubathandayo, abahlobo kunye nabo.
Ifonti elula, kodwa kuhle ukuvuyisana ngaphandle kweefrills ezininzi.
Njengokuba ingumthombo we Ijezi yoboya ebandayo, Owona mthombo wokuqala.
Okunye Umthombo wale mihla okhethekileyo.
Yoqobo ngu imibala ephathwayo kunye nemifanekiso abstract kancinci. Ngqo kunye noqobo.
Umthombo onje ukuba sibhale ngesandla ngethoni eluhlaza ngolwandlalo kunye nolwandlalo.
Omnye umthombo egxile kwimizekeliso ukuba sibhale kunye naye.
Umthombo oza kuphoswa kwaye uya kuba nakho fumana uncumo kuye nakubani na ofumanayo ukuhalalisela.
Umthombo kakhulu ibukeka kakuhle kwaye ime ngaphezulu kwayo yonke le nto, ngakumbi ukuphela kweemilo ezigobileyo.
Umthombo abathobekileyo, kodwa loo nto ibonakala kwesi sizathu.
Ngobusuku obungaphambi kweKrisimesi
Ukuba ubukhangela Umthombo kaTim Burton, oku kuyilinganisa ngokugqibeleleyo. Iyimfuneko kubabukeli beemovie.
Umthombo ibonakala ngokucacileyo kwayo kunye neenkwenkwezi ezibonakala.
Lo mthombo kusithatha ngaphambi kweencwadi zeenkulungwane ezidlulileyo apho ubuchwephesha babunononophelo olukhulu.
Uhlobo lohlobo oluhle olo unokunika umnwe owahlukileyo kumakhadi akho.
Omnye umthombo ngaphandle kwempumelelo kodwa yintoni uyakwazi ukufikelela entliziyweni yakhe nawuphi na umntwana ngomyalezo omnandi.
Njengoko igama layo libonisa, ilekese eninzi ifonti elula.
Enye ifonti ene ithoni ethandekayo ngemibala eluhlaza kunye nobomvu njengabalinganiswa abaphambili.
Imfihlo kaSanta iyahanjiswa iimilo ezirhangqiweyo ukubonakalisa kakuhle iisimboli zeKrisimesi.
Akukho nto ingako siyithethayo ngalo mthombo egxile kumakhekheba ekhephu kunye neetoni ezibandayo.
Umthombo umbala omnye apho imihombiso yeKrisimesiuhombise unobumba ngamnye.
Omnye umthombo obekelwe iijezi eziqhelekileyo ebusika.
IKrisimesi yeKingthings 2
Lo mthombo ngu zihonjiswe ngamahlwantsi ekhephu ukuyenza yomlingo ngakumbi.
Ikhephu lithatha inqanaba eliphambili umphezulu wonobumba ngamnye ezenza lo mthombo.
Umthombo apho santa abalinganiswa yenza imilo yoonobumba.
Njengokuba sasikhona ukwenza isipho, lo mthombo uthatha elo nyathelo ngokwalo.
Omnye umthombo kunye nesazisi esivela kuluhlu esiyipapasha namhlanje.
Njengokuba sithatha umnyango wekhaya lethu, lo mgca usizisela ezo zinto zibhombisayo koonobumba.
Ngakumbi iinkwenkwezi ngomlingo Ifonti yekrisimesi.
Elula njengenye ibhola ekhephu.
Okunye iifonti ezintle kakhulu Uluhlu, nangona lunikezelwe kwimifanekiso.
Omnye yoqobo kunye nokonwabisa Ifonti yekrisimesi.
Yenziwe ngathi Iminqwazi yekrisimesi lo mthombo.
Izandi zeKrisimesi kule font yeKrisimesi.
Sigqibe ngomnye ifonti efanelekileyo kwezi ntsuku amaqela Christmas.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zasimahla ezingama-39 zeKrisimesi
Malunga nama-60 amagcisa okuzenzela kunye neemaski zangasemva ezivela kwi-movie eqaqambileyo, ngaphandle kweekhredithi
Abalinganiswa baseBabina ababonisa kakuhle iisimboli zezixeko zehlabathi